फेसबुकले नाम परिवर्तन गरी कम्पनीको नयाँ नाम 'मेटा' राख्यो !! | सुदुरपश्चिम खबर
फेसबुकले नाम परिवर्तन गरी कम्पनीको नयाँ नाम ‘मेटा’ राख्यो !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : १२ कार्तिक २०७८ ०७:२९
मेटाभर्सलाई ‘इन्टरनेटको भविष्य’ भनेर चर्चा गरिएको छ । कतिपयले यसलाई भर्चुअल रियालिटीकै परिष्कृत रूप पनि भनेका छन् । जसरी सन् १९८० को दशकमा ठूला–ठूला मोबाइल सेटलाई अहिले स्मार्टफोनले विस्थापित ग¥यो, त्यसरी नै भर्चुअल रियालिटीलाई मेटाभर्सले विस्थापित गर्ने बताइएको छ । बीबीसीका अनुसार सबै प्रकारको डिजिटल प्रविधिलाई मेटाभर्सले जोड्ने काम गर्छ । त्यसका लागि अहिले कम्प्युटरको प्रयोग भए पनि मेटाभर्समा भने टाउकोमा लगाउने एउटा उपकरण(हेडसेट) प्रयोग गरिनेछ ।ekantipur.com बाट सभार